Fitsidiham-paritra famahana olana: nahavita nitety distrika maherin’ny 40 ny IEM sy Rajoelina | NewsMada
Fitsidiham-paritra famahana olana: nahavita nitety distrika maherin’ny 40 ny IEM sy Rajoelina
Niato noho ny fanadinam-panjakana BEPC ny fitsidiham-paritra nataon’ny kandidà Rajoelina, nampahafantarana ny IEM amin’ity herinandro ity. Mialoha ny hiverenana hidinana eny ifotony indray anefa, nahavita nitety distrika maherin’ny 40 ny hetsika natao tao anatin’ny telo volana, nanomboka ny volana jona teo ka hatramin’ny faran’ny aogositra. Nahomby izany ary maro ireo resy lahatra tanteraka fa hany vahaolana tokana sy mahomby ary hahitana vokatra ao anatin’ny fotoana fohy ny vina IEM, entin’ny mpanorina azy eny ifotony ireny. Vory marobe hatrany ireo vahoaka tamin’ireo toerana nolalovany sy nampahafantarana izany.
Fihainoana ny olana eny ifotony…
Naneho fahavononana ny hanohana azy ny maro amin’ireny vahoaka notsidihina ireny, indrindra taorian’ny nahazoany ny laharana faha-13 maha kandidà ny filohan’ny Tetezamita amin’ny fifidianana filoham-pirenena.
Anisan’ny fomba fiasa ataon’ny mpanorina ny IEM ny fihainoana mivantana ny olana sy ny hetahetan’ny mponina amin’ny sehatra rehetra. Misy ny vahana eo no ho eo. Eo koa anefa ireo nampanantenaina fa hotanterahina ary tsy mivadi-belirano amin’izany ny tenany. Noraisiny hatrany ireny olana ireny. Anisan’izany ny haratsian’ny lalana, ny tetezana, ny sekoly, ny toeram-pitsaboana, ny olan’ny tantsaha toy ny fambolena sy ny fiompiana… Manampy izany ny momba ny tanora eo amin’ny famoronana asa, ny fialamboly sy ny fanatanjahantena, ny fotodrafitrasa ho azy ireny: toeram-piofanana sy kianja manara-penitra…
Tahaka izany koa ny zokiolona sy ny fikambanam-behivavy, samy nitondra ny hetahetany sy ny olany avokoa. Efa ao anatin’ny IEM avokoa izany rehetra izany.
Ankoatra izany anefa, teo koa ny tsodrano avy amin’ireo tangalamena sy sojabe na koa ny raiamandreny amin’ireny toerana ireny amin’ny hiantsorohany ny andraikitra lehibe eto amin’ny firenena. Ambentin-tenin’ny kandidà laharana faha-13 koa ny tsy fahatahorany ireo kandidà ireo sy ny fanehoany fa mila tanora tia tanindrazana sy manana vina ary niomana ny firenena.